कृष्ण सेन लामो जेल जीवनबाट बाहिर आउनु भएकाले थकित हुनु स्वभाविकै थियो, त्यो भन्दा पनि पार्टीको फुटले वहाँ पिरलिनु भएको थियो । काठमाण्डौंमा किरण (मोहन वैद्य) सँग यात्राबारे छलफल भएको थियो । हामी काठमाडौंबाट बस र रेलको लामो यात्रापछि कलकत्ता पुग्यौं । कलकत्ता विश्वविद्यालयमा भएको त्यो सम्मेलनमा हामीसँगै सहभागी भयौं । मैले दुईवटा सत्रलाई सम्बोधन गरेको थिएँ सेनजी निकै प्रभावित हुनुभएछ । जीवन हो जस्तो पनि बेहोर्नु पर्छ भनेर मैले सेनलाई कलकत्ता विश्वविद्यालयका पर्खालहरूमा लेखेको नारा आमार बारी, तोमार बारी, नक्सलबारी ! नक्सलबारी !! देखाएँ, वहाँ मुसुक्क हाँस्नु भयो ।
विद्यार्थी जीवन सकिए पछि तराईमा जन्मेहुर्केको मान्छे पहाड बुझ्ने मनसाय थियो । पार्टीको पहलमा नुवाकोटको थान्सिङ महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा हेडसर भएर जाने अवसर जुर्यो । पार्टी टुटफुटको बेला नुवाकोटमा मशाल जिल्ला पार्टी कमिटीमा तीनजना थियौं जसमा दुईजना हेडसर र एकजना विद्यालय संचालक समितिका अध्यक्ष । पोष्टबहादुर बोगटी तुप्चे माध्यमिक विद्यालयको संचालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र नुवाकोट मशाल पार्टीको जिल्ला सेक्रेटरी पनि । संचारको आजको जस्तो सुविधा थिएन । पार्टीको सर्कुलर बोकेर तुप्चेदेखि थान्सिङ आउन आधी दिन खर्चिनु पथ्र्यो । म थान्सिङ रहँदा सम्म धेरैजसो बैठक थान्सिङमा हुन्थे, थोरै तुप्चे र एकपटक कुँवरीमा भएको थियो । सन १९८६ मा गर्मिको एकदिन पोष्टबहादुर एउटा खबर लिएर थान्सिङ आउनु भयो र सँगै काठमाडौं जानुपर्ने भयो भन्नुभयो अनि हामी काठमाडौं चल्यौं ।
कृष्ण सेन नेपालको विद्यार्थी राजनीतिमा सबैभन्दा बढी जेल जीवन विताउने व्यक्ति हो । वहाँले विद्यार्थी जीवनमा नै पटकपटक गरी सातवर्षभन्दा बढी जेल बस्नु परेको थियो । सेन भर्खर जेलबाट रिहा हुनुभएको थियो । पार्टी फुटको तानातानमा वहाँले निर्णय गर्न समय माग्नु भएको थियो । त्यही समय मलाई मशाल पार्टीले कृष्ण सेन सहित ६ जनाको टोलीको नेतृत्व गर्दै कलकत्ता (हाल कोलकाता) मा आयोजना हुने अभानेविसंघको सम्मेलनमा जान अनुरोध गर्यो । त्यसको मूल उद्देश्य कृष्ण सेनलाई पार्टीमा आवद्ध गर्न मलाई जिम्मा दिइएको थियो । कृष्ण सेन लामो जेल जीवनबाट बाहिर आउनु भएकाले थकित हुनु स्वभाविकै थियो, त्यो भन्दा पनि पार्टीको फुटले वहाँ पिरलिनु भएको थियो । काठमाण्डौंमा किरण (मोहन वैद्य) सँग यात्राबारे छलफल भएको थियो । हामी काठमाडौंबाट बस र रेलको लामो यात्रापछि कलकत्ता पुग्यौं । कलकत्ता विश्वविद्यालयमा भएको त्यो सम्मेलनमा हामीसँगै सहभागी भयौं । मैले दुईवटा सत्रलाई सम्बोधन गरेको थिएँ सेनजी निकै प्रभावित हुनुभएछ । जीवन हो जस्तो पनि बेहोर्नु पर्छ भनेर मैले सेनलाई कलकत्ता विश्वविद्यालयका पर्खालहरूमा लेखेको नारा आमार बारी, तोमार बारी, नक्सलबारी ! नक्सलबारी !! देखाएँ, वहाँ मुसुक्क हाँस्नु भयो ।
तीन दिनको सम्मेलन सकेर दुई दिन हामी कलकत्ता घुम्यौँ । कलकत्ताको हावडापुल, सडकको बीचमा चल्ने ट्राम यातायात, चिडियाखानामा पहिलो पल्ट देखेको जिउँदो जिराफले हामीलाई निकै रोमाञ्चित बनाएको थियो । कलकत्ता विश्वविद्यालय बाहिर फुटपाथमा एक किलोमिटर भन्दा लामा पुस्तक पसलहरू हाम्रा नयाँ अनुभवहरू थिए । सेनजीसँग म घनिभूत वैचारिक बहसमा थिएँ । कलकत्ताका बुद्धिजीवीहरूसँग तीन चरणको बैठक बसेका थियौं । कलकत्ताबाट फर्कने रात सेनजीले मलाई आफ्नो राजनीतिक यात्रा हामीसँगै हुने निर्णय सुनाए पछि म पुलकित भएको थिएँ । हाम्रो विद्यार्थी कालदेखिको लामो सहयात्रासँगै रह्यो । पछि वहाँ जनादेशको सम्पादक म नियमित स्तम्भ लेखक । मेरो सन २०१० मा प्रकाशित आठौं पुस्तक पराधीन नेपाली अर्थतन्त्र, ४६ लेखहरूमा ३३ सेनजीको सम्पादनमा प्रकाशित जनादेश साप्ताहिकका लेखहरू रहेकाले मैले यो पुस्तक सेनजीलाई समर्पण गरेको छु । साथी सेन श्रद्धाञ्जलि ।
नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षलाई कसरी बुझ्ने ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)भित्रको अन्तरसङ्घर्ष एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा चल्ने जस्तो त…
संसारकै रमाईला हाम्रा प्रधानमन्त्री !
पिएम ओलिज्यूले भानू जयन्तिमा राम, रामायण, अयोध्याको प्रसग उठाएको विषय…
नेपाली भाषा साहित्यका उन्नायक आदि कवि भानुलाई कसरी बुझ्ने ?
गाँजा : किसानलाई खेती, व्यापारीलाई ओखती !